commerce inoratidza simba rakasimba, kusimba mudenda
Vashandi vanoremedza kuyambuka muganho e-commerce mapakeji, kuHuanghua International Airport muChangsha, mudunhu reHunan, muna Chivabvu 28, 2020. neMuvhuro, neSirika Road E-commerce bei ...
Chinese mainland inoshuma 4 nyowani inotapuriranwa munzvimbo iyi COVID-19 kesi
Vashandi vezvekurapa vanounganidza masampuli ekuongorora nucleic acid mudunhu reBayuquan, guta reYingkou, kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweChina kuLiaoning, Chivabvu 16, 2021. iyo Natio ...
Musuo wehuni wakasimba zvakare uri nyore kusvibiswa, isu tinofanirwa kutarisisa kusiyanisa musuwo wepaneru uye musuwo wehuni wakasimba
Kune mhando yemusuwo wakasimba wehuni veneer, uyo unowanzo kuve mushumo wakasimbiswa kwazvo wehuni. Ngatitarisei pane pfungwa yemusuwo wakasimba wehuni veneer kutanga. Iyo itsva standard inotaura zvakajeka kuti musuwo une solid wood veneer musuwo une hwaro hwezvinhu hwakasimba huni huni ...
PMI inoratidza kukura kunoramba kuri munzira chaiyo
Zviitiko zvekugadzira zveChina zvakawedzera zvishoma zvishoma munaKubvumbi, sezvakaratidzwa nekodhi yemaneja ekutenga inowira ku51.1 mwedzi wapfuura kubva pa51.9 munaKurume, data reNational Bureau ye Statistics rakaratidza neChishanu. Asi iyo indekisi yakaramba ichirimo mushe mukati mekuwedzera terr ...
Mukushongedzwa kwazvino, nekuda kwemusuwo wehuni une hunhu hwekuvhara kune yakasikwa mameseji uye akasiyana ekushongedza mhedzisiro, zvave zvakawanda sarudzo dzevanhu kushongedza mukamuri. Saka mushure mekunge gonhi remuti raiswa, maitiro ekuona kuti hupenyu hwebasa remusuwo wemapuranga unochengeta littl ...
Musuwo hausi chete rudzi rwekushongedza kwenzvimbo, asiwo mutariri wenzvimbo yega yega yakazvimiririra. Makanaka, akanyarara, akachengeteka uye mamwe mabasa akakosha, asi "yakasimba" iri nyore kuregeredzwa nevashandisi vekutanga. Nekuti zvigadzirwa zvisina kusimba hazvizoburitse pachena matambudziko mazhinji ...
Nzira yekusiyanisa pendi yemahara musuwo, ecological musuwo, solid huni musanganiswa musuo, solid huni yakapendwa musuwo uye yekutanga huni musuwo?
Musuwo wedanda mumba, unofanirwa kutora chinzvimbo chakakosha. Hunhu hwedhoo rematanda, mhando, dhizaini, brand uye zvichingodaro, zvese zvinofanirwa kutariswa pakusarudza musuwo wemapuranga. Panyaya yemhando, pane lacquer yemahara mikova, ecological madhoo, akaoma huni anoumbwa mikova, solid huni madhoo, epakutanga huni d ...
commerce inoratidza simba rakasimba, kushinga ...
Chinese mainland inoshuma 4 nyowani munharaunda tr ...